Meghan Markle's half-sister: Media scrutiny following Prince Harry engagement 'has caused the familyalot of pain' | All News M7 Meghan Markle’s half-sister: Media scrutiny following Prince Harry engagement ‘has caused the familyalot of pain’ – All News M7 Meghan Markle's half-sister: Media scrutiny following Prince Harry engagement 'has caused the familyalot of pain'
Meghan Markle's half-sister: Media scrutiny following Prince Harry engagement 'has caused the familyalot of pain'
The half-sister of Meghan Markle wants to set the record straight.
The half-sister of Meghan Markle, the American actress engaged to Britain’s Prince Harry, wants to set the record straight.
Fox News: http://www.foxnews.com/entertainment/2018/01/12/meghan-markles-half-sister-media-scrutiny-following-prince-harry-engagement-has-caused-family-lot-pain.html
သင်ရိုးသစ်နဲ့ စသင်မယ့် ဒုတိယတန်းမှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့ မလိုတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းအပြည့်အစုံ..... www.7daydaily.com/story/118044 ...
သင်ရိုးသစ်ဖြင့် စတင်သင်ကြားမည့် ဒုတိယတန်းတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် မလိုတော့
၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင် နှစ်တွင် အခြေခံပညာဒုတိယ တန်းကို သင်ရိုးသစ်ဖြင့် စတင် သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး သင်ရိုးသစ်အရ ဒုတိယတ�...
7dayတို့များခေါင်းစဉ်တင်လိုက်ပြီဆိုလူစိတ်ဝင်စားစရာ စာမေးပွဲတော့မစစ်ဘဲနေမလား!လစဉ်အမှတ်ပေးမဲ့ဟာ ဟိ
The paper apologized, but the worrying fact they published it remains. ...
The largest newspaper in Puerto Rico has apologized for running an opinion column that said Jewish people control the U.S. Congress and want to punish storm-ravaged Puerto Rico for its debt because they care so much about money.
- Progressive Democrats operate as fanatical Fascists while flying the flag of anti-Fascism. These treacherous, renegade pirates carry no letters of marque. Pestilential to the body politic, they deserve the iron gibbet cage. - - - - -
It was Trimp's fault. I saw him do it. We need to impeach him for all the hurricanes. Putin was in on it too. I hope Mueller nails him for it and Al Sharpton can become president and bring about universal harmony around the world, except for the white parts, of course.
Ah Bernie will turn every tragedy intoaBernie photo op.
Wont be looking at anymore donations till this paper retracts its statements as false
They need to give me back my donation money if that’s the way they feel. And to think my father was an Army Captain in the medical corps stationed there in WWII and said there wasachance of him and my mom living there and my brother and I being born there. Yes we are Jewish. How frigging sad for so much misunderstanding and hate for no reason.
Solely blame trump for abandoning you. It’s him the highest authority to whether or not help your country which probably among those he called ‘shithole’ recently. *Oops.
That's funny & horrid. But Congress looks at the PR asafraudulent, mismanaged government historically. Yes Wall Street pouched their economy foradecade, but they could've sought legal restitution. PR isa3rd world US territory.
That is the opinion piece of one. It is not the thoughts of the whole population. They should know the family values frauds in faith are the reason. Bless them all trapped in such damage.
That newspaper sure got THAT wrong!!!
Keep playing Puerto Rico don't make enemies of whom are not.
WE ARE ONE TIME TO LOVE
lo dicho dicho está y que difícil es borrarlo, eliminarlo, arreglarlo
Omg! Who are these evils...?
And people think Americans would let Bermie Sanders be president
မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ရပ်စနစ်တကျ ချမှတ်
ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းထားကြောင်း
ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ စက်မှုလက်မှုရေးရာ
ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းနိုင်ဦးက ပြောပါတယ်။
သတင်းအပြည့်အစုံ..... www.7daydaily.com/story/118032 ...
မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ စနစ်တကျချမှတ်ပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကို တိုက
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ရပ်စနစ် တကျ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစ�...
ybs ကိစ္စ တော့မပြောတော့ပါဘူး taxi ကိစ္စရောဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲ ရန်ကုန်ကားတွေ city taxi လုပ်ပါဆိုပြီတော့ လုပ်ပြီးကြပြီ နယ် taxi တွေကိုတော့ အခုထိအရေးမယူသေးတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ခင်ဗျာတို့မျက်လုံးတွေကမ်းနေတာလား လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရေ ရန်ကုန်မှာ အပေါးဆုံးက taxi တွေဘဲ လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နေရတာလဲ taxi တွေကြောင့်ဘဲ ဒါတောင် ထိုင်ကြည့်နေနိုင်တာ အံ့သြတယ် မအုပ်ချုပ်တတ်ရင်လဲ မြန်မြန်ဆင်းပေးကြပါ တိုင်ပြည်အရမ်းနှစ်နာပါတယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ရပ်စနစ် တကျ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းထား ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက် သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုရေးရာ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းနိုင်ဦးက ပြော သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း တင် သွင်းနေသည့် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး များအပါအဝင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်၊ တက္ကစီယာဉ်များ၊ နံပါတ်အနက် ယာဉ်နှင့် လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များကို စနစ်တကျပြန်လည်စိစစ်ရန် လို အပ်နေ၍ အစိုးရအဖွဲ့ကို အထက် ပါအတိုင်း တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် အက္ခရာ အလိုက် တက္ကစီယာဉ် ၂၅,၀၀၀ ကျော်၊ ရာသက်ပန်တက္ကစီ (AA, BB)ယာဉ် ၄၀,၀၀၀ ကျော်၊ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သုံးသိန်းကျော်ရှိကြောင်း ပို့/ဆက်ကော်မတီ၏စာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ‘‘ရန်ကုန်မှာဆိုရင် အိမ်စီး ကား၊ စီးတီးတက္ကစီ၊ လုံးဝမ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အေအေ၊ ဘီဘီလို ကားမျိုးတွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုကားတွေကို ပြန်ပြီး တိတိကျကျလုပ်ပေးဖို့ ပြောထားတယ်’’ဟု ဦးသန်းနိုင်ဦးက ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ယခင်က လိုင်စင်ချ ပေးရာ၌ ရန်ကုန်လိုင်စင်မရပါက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင် ပြည်နယ် စသည့် တိုင်းနှင့် ပြည် နယ်လိုင်စင်များဖြင့် ပေးခဲ့ခြင်း ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် မော်တော် ယာဉ်များ ပြည့်နှက်ခဲ့ကြောင်း ဦးသန်းနိုင်ဦးက သုံးသပ်ပြော သည်။ မော်တော်ယာဉ်မူဝါဒ တစ်ရပ်ချမှတ်ပြီးပါက အစိုးရအ နေဖြင့် အခွန်ကောက်ခံရာတွင် စနစ်တကျ ဖြစ်စေမည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များ ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးအဖွဲ့များက နယ်မြေဆင်း ကာ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ကားစာ ရင်းများ ကောက်ယူရန် ပို့/ဆက် ကော်မတီက စီစဉ်ထားပြီး ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် နံပါတ်အနက်ယာဉ်၊ နယ်ကျော်ယာဉ် အစီးရေမည်မျှရှိကြောင်း စာရင်းအတိအကျ ထွက်လာမည်ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ အကောက်ခွန်၊ စီးပွားကူး သန်း၊ ကညန၊ ဆိပ်ကမ်းဌာနတစ် ခုချင်းစီမှ မော်တော်ယာဉ်တင် သွင်းခွင့်မူဝါဒကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ခန့် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်လေ့ရှိကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ မူဝါဒများ ထုတ်ပြန်သဖြင့် ဈေးကွက် အပြောင်းအလဲ မကြာခဏဖြစ် ပေါ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ရောင်းချသူများနှင့် ကားဝယ်ယူမည့် ပြည်သူများ နစ်နာမှုရှိ ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မော်တော် ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးအသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးရန်မျိုး အောင်က ပြောသည်။ လက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေကို ၂၀၁၅ က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော်လည်း နည်းဥပဒေ မထွက်ရှိခဲ့ပေ။ ယခု ၂၀၁၈ တွင် ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်ပြေးဆွဲရေးဥပဒေ ထွက်ရှိရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်နေကြောင်း မော်တော်ယာဉ် ရောင်းဝယ်သူ များက ပြောသည်။
ရန်ကုန် taxi ကိုတော့ ဘေး city ရှိမှပြေးဆွဲခွင့်ရမယ်တဲ့ နယ် taxi တော့ဘာပြသနာမှမရှိဘူးလားမောင်အောင်
ကား မူ နဲ့ ဘဲ တိုင် ပတ်နေတယ် အ ကောင်းဆုံး နဲ့ အမြန် ဆုံး ဖြစ် သင့် နေပြီ
NLD ကိုအပြတ်သက်အားပေးခဲ့တာပါဝန်ကြီးတွေလွတ်တော်အမတ်တွေဆောက်သုံးမကြတော့နေရာတိုင်းမာ NLD အကြောင်းမပြောရဲတော့ဘူး
မူဝါဒ အတိအကျမရှိသေးသရွေ့တော့ ဈေးကွက်တွေကလည်း ကမောက်ကမ ဖြစ်နေရဦးမှာပါ ။
အရည် ကြို ကားတွေ လည်း ရှင်း ပစ် ပါ။ကာ စူတ်တွေ က အများ ကြီး ပါ။
ခုထိလည်း ချမှတ်ဖို့တင်ပြတုန်းပါလား ကွယ်တို့
မယောင်နဲ့ နော် ကားနဲ့စီးပွားရှာသူတွေ
A powerful illustration of the benefits of dental hygiene. ...
Ancient Mexican civilization was nearly wiped out by something stuck in their teeth
“This wasahugely devastating epidemic.”
Must be racism then.
ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲတွေ နှစ်လခန့်ကြာတဲ့အထိ
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် လေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။
ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲများ နှစ်လခန့်ကြာသည်အထိ ရွေးချယ်မှုမပြီးပြတ်သေးဟုဆ
ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲများ ပြုလုပ်မှု နှစ်လခန့်ကြာသည်အထိ ရွေးချယ်မှုမပြီးပြတ်သေးကြောင်း အုပ�...
တယောက်ကို ၂ ထေါင်ပေးရင် တမဲ ဝယ်လို့ရတယ်။ ရွာတွေမှာက ပညာ ဗဟုသုတနည်းတော့ အဆင်မပြေဘူး။ ပိုက်ဆံ ၂ ထောင်လောက်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ကို ရောင်းစားကြတယ်။ ဝယ်တဲ့သူကလည်း အရှက်မရှိဝယ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလဒ်က လူတွေ အုပ်စုအမျိုးမျိုး ကွဲကုန်ကြတယ်။ ပါတီကွဲ၊ကျောင်းကွဲတွေနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကောင်းတယောက် ရဖို့ မလွယ်ပါဘူးဗျာ...
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရှိဥက္ကဌတွေကမဲလိမ်မဲညစ်နဲ့မဲမသမာမှုတွေရှိနေတာကို ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ပေါင်းလိမ်လိုက်တော့ အလိမ်ခံရတဲ့လူကအလျှော့ပေးလိုက်ရတာတွေရှိတယ်။အဲဒါမုံရွာမြို့ ချမ်းမြဝတီရပ်ကွက်မှာ
လှိုင်သာယာမှာတော့ကျူးကျော်တွေကသန်းခေါင်စရင်းကိုင်ပြီးမဲလာထည့်ကြတယ်
ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေ မဟန်ဘူးဗျို့ ဖွတ်တွေဘဲရအောင်ဖန်နေကြတယ်
ဆင်ခြေထောက် ရောဂါ ကင်ဝေးဖို့အတွက် သန်ချဆေးပေါင်းတိုက်ကျွေးတာ စတော့မယ်
ဇန်နဝါရီ - ၁၆ ၊၂၀၁၈
ဆင်ခြင်ထောက်ရောဂါ အမြစ်တွယ်မှုရှိတဲ့ ခရိုင်(၄၅)ခရိုင်မှာ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါကင်းဝေးဖို့ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလ(၂၂)ကစပြီး သန်ချဆေးပေါင်းတိုက်ကျွေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေစတင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီခရိုင်တွေထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းက လေးခရိုင်ပါဝင်ပြီး မြို့နယ်ပေါင်း(၄၄)မြို့နယ်က လူဦးရေ ခြောက်သန်းကျော်ကို သန်ချဆေးတွေတိုက်ကျွေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါကင်းဝေးရေး လူအားလုံးဆေးတိုက်ကျွေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ၂၀၁၃ခုနှစ်ကစပြီး နေပြည်တော်၊ရန်ကုန်၊ပဲခူး၊ဧရာဝတီ၊တနသ်ာရီ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တွေမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆေးတိုက်ကျွေးတဲ့လုပ်ငန်းဟာ ငါးကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံးနှစ်လဲဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါကင်းဝေးရေးစီမံချက်အောင်မြင်စေဖို့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ ဆေးတိုက်ကျွေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ကင်းဝေးဖို့ သန်ချဆေးပေါင်း မသောက်သင့်တဲ့သူတွေကတော့ အသက်နှစ်နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊ရောဂါတခုခုကို ဆိုးရွားစွာခံစားနေရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆင်ခြေထောက်ရောဂါဟာ သွေးကြောထဲမှာနေတဲ့ သန်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီး ဆင်ခြေထောက်ရောဂါပိုး သယ်ဆောင်လာတဲ့ခြင်ကိုက်ရာက တဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါလဲဖြစ်ပါတယ်။
#ဆင်ခြင်ထောက်ရောဂါ #သန်ချဆေးပေါင်းတိုက်ကျွေး #LocalNews #7DayNews #7DayTV
(7Day News ဂျာနယ်နှင့် 7Day Daily သတင်းစာရဲ့ ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို 7Day TV ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
ဆငျခွထေောကျ ရောဂါ ကငျဝေးဖို့အတှကျ သနျခဆြေးပေါငျးတိုကျကြှေးတာ စတော့မယျ
ဇနျနဝါရီ - ၁၆ ၊၂၀၁၈
ဆငျခွငျထောကျရောဂါ အမွဈတှယျမှုရှိတဲ့ ခရိုငျ(၄၅)ခရိုငျမှာ ဆငျခွထေောကျရောဂါကငျးဝေးဖို့ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီလ(၂၂)ကစပွီး သနျခဆြေးပေါငျးတိုကျကြှေးတဲ့ လုပျငနျးတှစေတငျတော့မှာဖွဈတယျလို့သတငျးရရှိပါတယျ။
အဲ့ဒီခရိုငျတှထေဲမှာ ရနျကုနျတိုငျးက လေးခရိုငျပါဝငျပွီး မွို့နယျပေါငျး(၄၄)မွို့နယျက လူဦးရေ ခွောကျသနျးကြျောကို သနျခဆြေးတှတေိုကျကြှေးမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆငျခွထေောကျရောဂါကငျးဝေးရေး လူအားလုံးဆေးတိုကျကြှေးတဲ့ လုပျငနျးတှကေို ၂၀၁၃ခုနှဈကစပွီး နပွေညျတျော၊ရနျကုနျ၊ပဲခူး၊ဧရာဝတီ၊တနသျာရီ၊ကရငျပွညျနယျနဲ့ မှနျပွညျနယျတှမှော ဆောငျရှကျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
အခုဆေးတိုကျကြှေးတဲ့လုပျငနျးဟာ ငါးကွိမျမွောကျဖွဈကာ နောကျဆုံးနှဈလဲဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ လာမယျ့ ၂၀၂၀ခုနှဈမှာ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဆငျခွထေောကျရောဂါကငျးဝေးရေးစီမံခကျြအောငျမွငျစဖေို့ တိုငျးနဲ့ပွညျနယျတှမှော ဆေးတိုကျကြှေးတဲ့ လုပျငနျးတှကေို လုပျဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။
ဆငျခွထေောကျရောဂါ ကငျးဝေးဖို့ သနျခဆြေးပေါငျး မသောကျသငျ့တဲ့သူတှကေတော့ အသကျနှဈနှဈအောကျ ကလေးတှေ၊ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှေ၊ရောဂါတခုခုကို ဆိုးရှားစှာခံစားနရေသူတှဖွေဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဆငျခွထေောကျရောဂါဟာ သှေးကွောထဲမှာနတေဲ့ သနျကောငျကွောငျ့ဖွဈပှားတဲ့ရောဂါဖွဈပွီး ဆငျခွထေောကျရောဂါပိုး သယျဆောငျလာတဲ့ခွငျကိုကျရာက တဆငျ့ ကူးစကျတတျတဲ့ရောဂါလဲဖွဈပါတယျ။
ရုပျသံသတငျးထောကျ - လှငျသဲငယျဦး
#ဆငျခွငျထောကျရောဂါ #သနျခဆြေးပေါငျးတိုကျကြှေး #LocalNews #7DayNews #7DayTV
(7Day News ဂြာနယျနှငျ့ 7Day Daily သတငျးစာရဲ့ ရုပျသံတငျဆကျမှုတှကေို 7Day TV ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြမှာ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။) ...
အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ အရက်မူးလွန်ပြီး သေဆုံးတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အလောင်းကို ဆေးရုံတင် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ယာဉ်ပေါ်ကပြုတ်ကျ သေဆုံးမှု ပေါ်ပေါက်
သတင်းအပြည့်အစုံ..... www.7daydaily.com/story/118011 ...
အရက်မူး လွန်သေဆုံးသူကို ဆေးစစ်ရာမှ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျသေဆုံးကြောင်း ပေါ်ပေါက်
အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် အရက် မူးလွန်ကာ သေဆုံးသည်ဟုယူဆ သည့် အလောင်းကို ဆေးရုံတင် စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်ကပြုတ်ကျ သေဆုံးမှု...
The return of this duck-sized, sloth-shaped dinosaur—with feathers the color of the rainbow—is what we all need in life. ...
A new fossil showsadinosaur's feathers that shimmered likearainbow
This is the oldest example of iridescence inadinosaur.
Awwwww...a gay dinosaur.
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ လှပတဲ့ ကမ်းခြေတွေ ပေါများတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲ့ကမ်းခြေတွေရဲ့ ထူးထူးခြားခြား လှပမှုတွေက ကမ္ဘာကျော်အောင်ထင်ရှားလို့ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ကားတွေပါ လာရိုက်လေ့ရှိတဲ့ ကမ်းခြေမျိုးတွေပါ။
(7Day News ဂျာနယ်နှင့် 7Day Daily သတင်းစာ၏ မိတ်ဖက် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Marry မှရယူဖော်ပြပါသည်။)
ဟောလိဝုဒ် စတား Nicolas Cage ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Dangerous Bangkok ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်အိမ်တည်ရာ ဘန်ကောက် မြို့တော�...
You'll never feel so small. ...
Astronomers have managed to getafirst close look at distant galaxy from the dawn of the universe
Another solution involved using giant nets to sweep up and collect the waste. Obviously, they opted for the lasers. ...
Approximately 95 percent of the orbiting objects are debris, i.e., not functional satellites.
If you are able to disintegrate space junk, it would be very easy for these lasers to destroy satellites whenawar begin.
Practice target shooting of their antiballistic/antiaircraft directed-energy weapon systems
this junk which is thousands of tonnes up there is indeed dozens of billions of $ worth of ... realty.
Meghan Markle's half-sister: Media scrutiny following Prince Harry engagement 'has caused the familyalot of pain' All News M7 - 2018